Kuthetha ukuthini ukuphupha iwigi? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuxoka, ngelishwa, yinxalenye yobomi babantu kwaye kufuneka ndikuxelele ukuba ukuphupha ngewigi kunezo ntsingiselo. Kwixesha elidlulileyo kwakuyinto eqhelekileyo ukuba abantu banxibe ezi zinto zoncedo ukubonisa inqanaba labo ekuhlaleni.
Okokuqala, abantu babethanda kakhulu ukunxiba iiwigi zabo ezizele zii curls kwaye yayiluphawu lwasebukhosini. Imibala ibimhlophe, amehlo amade, kwaye abonisa ukuba abantu bahlala bephambi kwabanye.
Yikholwa okanye ungakholelwa, iwigi yinto ebaluleke kakhulu ebantwini kwaye uninzi luyayisebenzisa. Ke isicatshulwa senzelwe ukuzisa ukubonakaliswa kwaye kufuneka ndikuxelele ukuba inyathelo lokuqala lathathwa.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha iwigi?
2 Ukuphupha ujonge iwigi
3 Ukuphupha unxibe iwigi (itoupee)
4 Iphupha lewigi elahlekileyo
5 Ukuphupha omnye umntu enxibe iwigi
6 Ngaba iphupha liqinisekile okanye alilunganga?
Ngamafutshane, iwigi ibalulekile kubantu abaphulukene neenwele kunye nakwabo bafuna "ukumilisela" umlinganiswa. Ke ngoko, kubaluleke kakhulu ukuba sinikele ingqalelo kule micimbi ukuze siwele kwiimpazamo eziqhelekileyo.
Khumbula ukuba inyathelo lokuqala kukuqonda ukuba iphupha le-wig liyatshintsha kuxhomekeka kwimeko. Kwithiyori, iimeko eziqhelekileyo kufanele ukuba zihlalutywe kwaye utyekelo lwendalo kukuba neentsingiselo ezihambelana noko.
Nje ukuba ube nakho ukufikelela kulo lonke olu lwazi, kubalulekile ukwazi okungakumbi kunye nokufikelela kuyo yonke into. Apha ngezantsi uyakuba neemeko eziqhelekileyo kwaye kuya kufuneka ukhumbule zonke iinkcukacha ukuze ube neentsingiselo ezichanekileyo.
Ukuphupha ujonge iwigi
Ngaba ukhe wema wacinga ngemeko eqhelekileyo: umlo wezikhundla ezitsha kwindawo yakho yobungcali? Ewe, iphupha elo libonisa ukuba kuya kufuneka ujonge lo mbandela kwaye uphephe ukulwa okuqhelekileyo.
Khumbula ukuba ukunika inkcazo ebonakalayo, kufuneka uzame ukuqonda ukuba ukhuphiswano luyindalo. Khumbula ukuba luphawu lweofisi ephezulu, ngakumbi kwixesha elidlulileyo xa lithetha ubukhosi.
Umfanekiso ubonakalisa ngokulula ukuba lithetha ntoni iphupha kwaye nayiphi na intsimi yesenzo, zama ukuyiphumelela. Ukunyuselwa emsebenzini kuya kwenzeka kwaye isimemo somsebenzi esitsha siya kwenziwa kungekudala.
Ukuphupha unxibe iwigi (itoupee)
Uyaziphika njengomntu kwaye ayisiyonto intle, kuba oko kubonisa ukuba kuyafuneka ukukhangela ezinye izisombululo. Ke, jonga esipilini kwaye ukhumbule ukuba wahlukile, kokubini kwisimo sakho sengqondo nakwimizimba yakho.
Ukuphupha iwigi kwenzeka ngenxa yokuba umntu ehamba kwixesha lokudideka. Ke ngoko, akunakwenzeka ukuba ubone ukuba ungubani kwaye le nyaniso ayikwenzi ukuba ubone izinto njengoko zinjalo.
Iipateni zobuhle zinzima kwaye kuya kufuneka usoloko ujonge okulungeleyo ngalo mzuzu. Ngezi zizathu, lixesha lokuba uqhubeke nokuxabisa amaxesha akho okonwaba nosapho lwakho.
Iphupha lewigi elahlekileyo
Okokuqala, kuya kufuneka ujonge kabini kwaye eyona nto ibalulekileyo kukuqonda ukuba iintshaba ziya kukudlula. Ngale ndlela, uya kuzisa indelelo ngakumbi kwinto engakukhathazi kwaye uya kuba nayo ingqalelo eyimfuneko kuyo.
Iindlela ngaphambi kokuba ube nethemba okanye ungambi kwaye eyona nto iphambili kukwazi ukuqonda. Ukuba yinto engalunganga, lixesha lokuba uqale ngoku ukuba ube nengqwalaselo eyimfuneko yokwenza yonke into isebenze.
Abantu abaninzi banika ukubaluleka kwezinto ezimbi kwaye ukuphupha belahlekelwa yi-wig kuneentsingiselo ezingathandekiyo. Abo banobuchule banokuthatha imeko embi kwaye bazise ukufunda okusebenzayo kakhulu.
Amandla aqinisekileyo kunye nalawo aphambi kwakho, esona simo sengqondo siphambili kukubahlula. Okulungileyo kufuneka kufakwe kwaye okungalunganga kufuneka kulibaleke, ke le yeyona ndlela iphambili.
Ukuphupha omnye umntu enxibe iwigi
Ngamafutshane, ukuba uphupha ngomnye umntu onxibe iwigi, kungekudala uza kuba nesibhengezo sotshintsho. Kusenokwenzeka ukuba kangangexesha elithile ubuphila notshintsho kunye neemeko ezimbi kakhulu.
Uloyiko lokuqhubela phambili luyinkimbinkimbi kuba awuyi kuva ngathi imeko engqongileyo iyinyani ngokupheleleyo. Ukuba ikhuselekile, kuya kufuneka uqhubeke, kungenjalo uyiphephe, kuba inokuzisa iingxaki ezininzi.
Abaninzi bakholelwa ukuba ukuphupha malunga newigi enxitywe ngomnye umntu kunokuba nentsingiselo engeyiyo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuzama ukuba kwindaleko rhoqo kwaye umzuzu ofanelekileyo uya kuhlala uyile nto.
Ngaba iphupha liqinisekile okanye alilunganga?
Ekuqaleni iphupha linokubonakala lilibi kwaye kufuneka ndikubonise ukuba akunjalo, kuba lineentsingiselo ezilungileyo. Ukuzijonga ngaphakathi kungcono, kuba kugxilwe kuwe kwaye akusekho kubantu abakungqongileyo.
Ukuphupha iwigi ngumqondiso ojonga ngakumbi "ingca endlwini yakho" ungcono kunezinye. Ukucinga ngayo kubalulekile kwaye ukhetho olungcono kuwe kukujonga kwezi zihloko zinomdla.